Modeela COC Bara 2012 Muummee BLAGf - Jimma College of Teachers Education
Modeela COC Bara 2012 Muummee BLAGf
Civ 1. Dimokiraasii ilaalchiisee kan sirri ta’e kami?
Bifa bulchiinsaa waliigaltee uummataa bilisa ta’een gaggeeffamuudha
Sirna bulchiinsaa aangoon ol’aanaa kan uummataa ta’e dha
Bulchiinsaa hoggantoonni fedhii uummataaf itti gaafatamummaa fudhatanidha.
Civ 2. Kanneen armaan gadii keessa pirinsipilii dimokiraasii kan hin taane kami?
Sirna paartii tokkoo
Hordooffii fi Sirreeffama
Civ 3. Mirga dimokiraasii mirga namummaa irraa maaltuu adda godha?
Mirgi dimokiraasii kan hin mulqamnee dha
Mirgi dimokiraasii mootummaan kan kennamuu miti
Mirgi dimokiraasii nama lammii ta’eef kan kennamuu dha
Mirgi dimokiraasii kan hin jijjiramnee dha
Civ 4. Biyya tokko keessatti bulchiinsi gaariin akka jiraatu maaltu barbaachisaa?
Seektera dinagdee dhuunfaa
Civ 5. Biyya tokko keessatti bulchiinsi gaariin jira kan jechisiisuu:
Gaaffii ummataaf deebii kennuun yoo jiraate,
Ittigaafatamummaan yoo jiraate,
Hirmaachisummaan yoo jiraate
Civ 6. Kanneen armaan gadii keessaa mirga siyaasaa kan ta’e kami?
Tajaajila fayyaa, barnootaa fi bilbila argachuu
Mirga odeeffannoo gahaa ta’e argachuu
Mirga qabeenyaa horachuu
Civ 7. Waldanda’uun baay’inummaa(hedduminaa) yoo jiraate:
Sirna dimokiraasii ni cimsa
Nageenyi akka jiraatu ni gargaara
Ijaarsa hawaasa Siivilii ni ariifachiisa
Civ 8. Biyya tokko keessatti bulchiinsi gaariin yoo jiraate olaantummaan seera bifa kamin ibsama?
Seerri loogii malee hojirra oola
Mirgi namummaa ni kabajama
Manni murtii malaanmaltummaa irraa walaba ta’e jiraata
Civ 9. Ol’aantummaan seeraa yoo mirkanaa’ee bu’aan gama hawaasummaatiin argamuu danda’u kami?
Lammiilee jiddutti jaalalaa fi walkabajuutu jiraata
Aadaa hojii cimaa ijaaruun ni danda’ama
Seerri dhugaa irratti hundaa’e hojirra oola
Baajanni guddaan misoomaaf ooluu danda’a
Civ 10. Biyya kamiyyuu keessatti madda seeraa fi qajeelchaa seerotaa kan ta’e kami?
Civ 11. .Seerri biyya tokkoo dimokiraatawaadha kan jedhamu:
Haqummaa yoo qabaate
Hoordofuuf salphaa yoo ta’e
Kaayyoo ifa ta’e yoo qabaate
Civ 12. Sirna dimokiraatawaa ta’e keessatti heerri maaliif barbaachisa?
Fedhii mootummaa guutuuf
Dirqama lammiilee qofa ibsuuf
Aangoo mootummaa daangeessuuf
Civ 13. .Malaanmaltummaan karaa siyaasaatiin miidhaa akkamii fiduu danda’a?
Hojiirraa oolmaa dimokiraasii fi ol’aantummaa seera qancarsa
Babaldhachuu hoji dhabdummaa fi hiyyummaa fida
Miirri waliin hojjachuu hawaasaa ni laafa
Qisaasa’a qabeenyaa, qaala’uu gatii nyaataa fi meeshaa fida
Civ 14. Itoophiyaan maaliif malaanmaltummaa irratti duultee?
Biyya birootti akka hin babal’anneef
Ol’aantummaa seera mirkanneesuuf
Civ 15. .Walqixxummaa jechuun:
Haala qabatamaa ta’een mirga (faayida) walfakkaatu qabaachuu
Haala qabatamaa ta’een eegumsa seera walfakkatu qabaachuu
Haala qabatamaa ta’een dirqama walfakkaatu qabachuu
Hunduu deebii dha.
Civ 16. Walqixxummaan maaliif barbaachisaa?
Hawaasaa fi mootummaa jiddutti hariiroo gaarii uumuuf
Tajaajili hawaasummaa akka guddatuu waan godhuuf
Bulchiinsaa gaarii ijaaruuf
Civ 17. Walqixxummaa koornayaan barnnoota irratti jiru kan hin mul’isne kami?
Carraa barnootaa walqixa qabaachuu
Itti faayadama bu’aa barnootaa walqixa gonfachuu
Carraa adeemsa barachuu keessatti hirmaannaa adda addaa qabaachuu
Hundi deebii dha
Civ 18. Akka Heera MFDR Itoophiyaatti mirgi hiree ofii ofiin murteessuu Saboota, Sab-lammootaa fi Uummattootaa ilaachisee kan armaan gadii keessaa tokko mirga kenname miti.
Mirga dhimma saboota ollaa irratti murtii kennuu
Mirga afaan ofii dubbachuu fi guddisuu
Mirga seenaa ofii eeguu fi aadaa ofi guddisuu
Mirga ofiin of bulchuu
Civ 19. Kanneen armaan gadii keessaa kaayyoo waldaa dubartootaa kan ta’e kami?
Siyaasa keessatti olaantummaa dhiiraa, olaantummaa dubartootaan bakka buusuuf
Fedhii hooggantoota gama dinagdeefi siyaasaatiin jiru guutuuf
Walqixxummaa koornayaa gama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaatiin fiduuf
Civ 20. Akka heera MFDR Itoophiyaati walqixxummaa amanti ilaalchisee kan sirri ta’e kami?
Namni kamiyyuu amantii barbaade hordoofuuf mirga qaba
Amantii isaa dhuunfaan ykn namoota biroo wajjiin waqeefachuuf mirga qaba
Namni kamiyyuu amantii isaa barsiisuuf mirga qaba
Civ 21. Haqummaa ilaalchisee kan sirri hin taane kami?
Namoota haala walfakkaatuun keessummeessuu.
Namoota fedhii adda addaa qaban haala walfakkaatuun keessummeessuu
Mirgaa fi dirqama jiru walqixa qooddachuu.
Civ 22. .Akaakuu haqummaa keessaa yeroo baay’ee mana murtii keessatti hojiirra kan ooluu kami?
Haqummaa faayidaa fi gahee waliif qooduu
Civ 23. Akka Heera MFDR Itoophiyaatti namni yakkaan shakkame tokko yoo to’annoo seeraa jala oolu mirga armaan gadii keessaa kam qaba?
Maaliif akka barbaadamee afaan beekuun itti himamuu qaba
Yakka shakkameef dirqamaan akka amanuu hin taasifamu.
Namni yakkaan shakkame tokko mirga callisuu ni qaba
Civ 24. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu amala gaarummaa lammii tokkoo agarsiisa?
Namaaf kabaja qaabaachuu
Namoota rakkoo qabaniif gargaarsa taasisuu
Naannoo ofii kunuunsuu
Civ 25. Haqummaa faayidaa fi gahee waliif qooduu “distributive justice” ilaalchisee kan sirri hin taane kami?
Lammiin hundi tajaajila hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa bifa walmadaaluun argachuu qabu
Lammiin hundi ittigaafatamummaa bifa walqixa ta’een qooddachuu qabu
Lammiileen fedhii fi muuxannoo adda addaa qaban bifa walfakkaatuun keessummeeffamuu qabu
Lammiilee sadarkaa fi dandeettii walfakkaatu qaban carraa walfakkaatu argachuu qabu
Civ 26. Bilisummaan mana murtii maaliif barbaachisaa?
Seera yakkaa mootummaa naannoolee qopheessuuf
Dhiibbaa tokko malee murtii haqaa kennuuf
Yeroo barbadan irratti murtii kennuuf
Haala itti fayyadama aangoo qaamoolee biroo to’achuuf
Civ 27. Sirna dimokiraasii keessatti haqummaa mirkanneessuun gahee eenyuuti?
Civ 28. Kanneen armaan gadii keessaa gahee mana murtii kan ta’e kami?
Prinsiploota dimokiraasii kunuunsuu
Civ 29. Akka hiika ammayyaatti jaalala biyyaa ilaalchisee kan sirri hin taane kami?
Sirna dimokiraasii dagaagsuuf hojjachuu(qabsaa’uu)
Laggeen, bosonaa fi qabeenyaa uumamaa leellisuu fi faarsuu
Seeraaf bitamuu (abboomuu)
Civ 30. Muldhistoota jaalala biyya kan ta’e kami?
Dirqama heeraa guutuu
Nageenyaa biyyaa eeguu
Civ 31. Namni biyya isaa jaallatu:
Qabeenyaa biyyaa dhuunfaan fayyadamuun of guddisa
Mirga namoota biroo kabajuu
Birmadummaa biyya biroo hin kabajuu
Civ 32. Kanneen armaan gadii keessa hundee jaalala biyyaa kan ta’e kami?
Civ 33. Kanneen armaan gadii keessaa tokko jaalala biyyaa kan ibsu miti.
Oomisha biyya alaa fayyadamuun biyya ofii guddisuu
Oomisha biyyaatti namoonni biroo akka itti fayyadaman jajjabeessuu
Oomisha fi oomishtummaa biyyaa guddisuuf cimani hojjachuu
Tajaajila biyya ofitti fayyadamuu
Civ 34. Namni tokko jaalala biyyaa eessa irraa argachuu danda’a?
Civ 35. Jaalala biyyaa nama dhuunfaan ibsamu kan hin taane kami?
Fedhii ofii caalaa biyyaaf dursa kennuu
Fedhii hawaasaa caalaa fedhii ofiif dursa kennuu
Kabaja biyyaa fi hawaasa biyyaatiif kennuu
Civ 36. Kanneen armaan gadii keessaa madda goolii uumtummaa kan ta’e kami?
Humnaa ol of-jaallachuu
Civ 37. Ittigaafatamummaa jechuun:
Ajaja hojiirra oolchuu
Civ 38. Kanneen armaan gadii keessaa madda ittigaafatamummaa kan ta’e kami?
Civ 39. Ittigaafatamummaa dhuunfaa kan hin taane kami?
Yeroo barbaadaman hogganuuf qophaawuu
Maatii ofii deeggeruu, guddisuu, barsiisuu
Fedhii fi mirga namoota biroof yaadu
Gocha raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaawuu
Civ 40. Itti gaafatamummaa bahuu irraa bu’aan argamu danda’u:
Civ 41. Itti gaafatamummaa nama tokko kan madaalamuu danda’u:
Hariiroo hawaasa keessatti qabu irraa ka’uudhaan
Sadarkaa hawaasummaa qabu irra ka’uudhaan
Sadarkaa barnoota isaa irra ka’uudhaan
Hunduu deeb dha.
Civ 42. Yeroo balaan adda addaa biyyaa fi uummata mudatu lammiileen itti gaafatamummaa kam bahuu qabu?
Itti gaafatamummaa lammummaa
Itti gaafatamummaa namummaa
Itti gaafatamummaa siyaasaa
Civ 43. Itti gaafatamummaa lammiilee kan hin ta’ane kami?
Heeraa fi seera kabajuu fi kabachiisuu
Qabeenya uumamaa karaa qaama birootiin akka eegamu gochuu
Tumaataalee fi duudhaa heeraaf amanamoo ta’uu
Yeroo balaan (rakkinni) adda addaa biyya mudatu deebii kennuu
Civ 44. Hojii jechuun:
Gocha bu’aa qabeessa waan faayidaa qabu uumuu danda’uudha
Gocha dhalli namaa jireenyaa isaa fooyyeeffachuuf tattaffii taasisuudha
Gocha dhalli namaa dinagdee uumuuf carraaqqii taasisuu dha
Civ 45. Kanneen armaan gadii keessaa duudhaa hojii tarkaanfachiisoo kan hin taane kami?
Hojii kamiifuu kabajaa kennuu dhabuu
Nama hojjatuuf kabaja kennuu
Civ 46. Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa hojii kan ta’e kami?
Meeshaa guddina biyyaati
Ofitti amanamummaa jajjabeessa
Fedhi jireenyaa dhala namaa guuta
Civ 47. Qulqullina hojiirratti dhiibbaa kan fiduu danda’u kami?
Civ 48. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirrii walitti firoome?
Fifinnee – Bulchiinsa Naannoo
Oromiyaa – Bulchiinsa Magaalaa
irredawaa – Bulchiinsa Magaalaa
Itoophiyaa – Mootummaa tokkummaawaa
Civ 49. Kanneen armaan gadii keessaa Imaammata Alaa Itoophiyaatiif bu’uura kan ta’e kami?
Biyyoota biroo waliin karaa nagaatiin waliin jiraachuu
Birmadummaa waliinii fi nageenya biyyoota birootiif faallaa ta’uu
Dhiimma qaamolee biroo keessa galuu
Fedhii biyyoota birootiif dhimma dhabuu
Civ 50. Murtoon dhiibbaa kamiiyyuu kan qaama seera tumuu fi seera raawwachiisu irraa walaba ta’e mana murtiitiin ni kennama. Kan armaan gadii keessaa kamtu hima armaan olii guduunfaa?
Aangoo olaanaan qaama seera hiiktuu harka jira
Seerri aangoo mana murtii daangessu hin jiru
Mana murtiitii olitti aangoon biraa hin jiru
Gochaalee bulchiinsaa irratti seerri aangoo olaanaa qaba
Civ 51. Heerri seera bu’uuraa biyyaa kan seerotaa fi qajeelfamoota hundaa ol ta’e yoo ta’u, heeraan buluun yaada maal jedhu waliin walqabataa?
Olaantummaa bulchiinsaa mirkaneessuu
Olaantummaa seeraatiif dhaabbachuu
Fedhii garee muraasaa eeguu
Civ 52. Namni tokko dhaabbata keessatti loogii namootaan irra gaheen hiriyyaan dhihoo jijjiirraadhaaf haala mijeesseef haa jennu. Akaakuun malaammaltummaa nama kanaan raawwatame:
Aangootti seeraan ala fayyadamuu
Civ 53. Heerri MFDRI tokkoon tokkoon saboota,sablammoota fi ummattoota biyyattiitiif mirga afaan ofiitiin dubbachuu,barreessuu fi afaanii fi aad aa ofii dagaagfachuu kenneera.
Civ 54. Kanneen armaan gadii keessaa manni barumsaa barattoota qaama miidhamtoota ta’an gargaaruuf maal irratti xiyyeeffata?
Kabajaa fi beekkamtii walqixaa
Walqixa keessummeessuu dhiisuu
Civ 55. Yeroo namni tokko amantii isaa/ ishee nama biraa irratti fe’uuf yaalu/tu haalli ni uumama jedhamee eegamu:
Waliin jireenyaa fi jaalala
Garagar bahiinsa mootummaa fi amantii
Walitti bu’iinsa garee amantii
Civ 56. Kanneen armaan gadii keessaa kan irra caalaa lammiileen walqixa tajaajila hawaasummaa fi hirmaannaa taasisuu qabu jedhu kami?
Civ 57. Kabajni aadaa saboota,sab-lammootaa fi ummattoota Itoophiyaa tumaataaleekam ibsa?
Tokkummaa garaagarummaa keessatti
Walitti bu’iinsa hammeessuu
Civ 58. Kanneen armaan gadii keessaa uummatni aangoo seeraan alaatiin akka hin miidhamneef kan dhoowwu:
Civ 59. Dhaabbilee hedduun Itoophiyaa keessatti gochaalee hooggantootaa kan haqummaa hin qabne heddu qeequ.Yaadni hima armaan olii kana ibsu kami?
Bulchiinsa gaariin dhabamuu
Civ 60. Kanneen armaan gadii keessaa barbaachisummaa gibiraa irratti barattoonni daree keessatti hubannoo gahaa akka argatan jajjabeessuuf kan oolu kami?
Gibiraa fi bu’aa inni guddinaaf qabu
Ba’aa gibirri abbootii qabeenyaa irra buusuu
Gibira akka hin kaffalle dhoorkuu
Gibiraa fi dhiibbaa negatiivaa misooma irratti qabu
Civ 61. Barsiisaan Barnoota Lammummaa fi Amala Gaarii barattoonni akka hubannoo dhimma haqummaa fi sirna haqaa akkasumas haqa eeguu keessatti gahee lammummaa bahuu qaban maal akka ta’e gargaaruu qaba.Kanneen armaan gadii keessaa barsiisaan BLAG kan irratti xiyyeeffachuu qabu kami?
Hirmaannaa sirna haqaa keessatti gahee barattootaa madaaluu
Ilaalcha barattootaa gama haqummaan jiru jijjiiruu keessatti bu’a qabeessummaa barannoo jiru madaaluu
Gahee lammiilee gama sirna haqaa eeguu keessatti qaban barattoonni akka sakatta’an naannoo isaanii irratti ramaduu
Civ 62. Barsiisaan BLAG kutaa 6ffaa barattoonni adeemsa muudama abbootii seeraa Itoophiyaa akka agarsiisan ajaje haa jennu. Kanneen armaan gadii keessaa muudama abbootii seeraaf kan ulaagaa ta’u kami?
Civ 63. Namni dhuunfaa kan sodaa tokkummaa biyya isaa irratti jiru hubachuun yaada furmaata ta’uu danda’u kaa’u:
Lammii jaalala biyyaa qabu
Civ 64. Yeroo tokko tokko ogeeyyiin icciitii maamila isaanii cabsuuf dirqamuu danda’u. Dirqamni akkanaa:
Dirqama safuu maamilaa eeguu
Dirqama seeraa maamilaa eeguu
Dirqama ogummaa maamila waliin walqabate
Dirqama dorgommii maamilaa fi ummata waliin walqabate
Civ 65. . “Hojiin foonii fi dhiiga dhala namaati.” Sababni barbaachisaan hojjechuu yaadni kun agarsiisu:
Civ 66. Kanneen armaan gadii keessaa kan tooftaa of danda’uu ta’e kami?
Civ 67. Obbo Tolasaan nama sibiila tumuudhaan of jiraachisuudha. Ijoollee lama kan mana barumsaatti ergu qaba. Haa ta’u malee, ijoolleen isaa tuffatamuu irraa kan ka’e barnoota isaanii irratti rakkoon isaan qunnameera.Baay’ee da llanuun mana barnootaa deemuu didaa jiru. Maddi rakkoo kanaa maali?
Ilaalcha duubatti hafaa hojii sibiila tumuu irratti jiru
Civ 68. Kanneen armaan gadii keessaa mirga walqixxummaa hojii fi kaffaltii dubartootaa kan ibsu kami?
Mirga haqummaa argachuu
Civ 69. Namni tokko of danda’aa ta’uu fi hirkattummaa irraa bilisa ta’uuf fedhii olaanaa qaba haa jennu. Yaadni hima armaan olii kana faallessu kami?
Bu’aan rakkoo tokkoo guutummatti dhiibbaa alaati jedhanii amanuu
Dandeettii galma lafa kaa’uu,karoorsuu fi gochaalee kallattii qabsiisuu qabaachuu
Dhugummaa waan tokkoo eeguu
Namni tokko tattaaffii fi dandeettii dhuunfaa qabaachuu amanuu
Civ 70. Hawwiin nama dandeettii hawaasummaa fi barattuu gahumsa qabdu akka taatetti of ilaalti. Ilaalcha ishee kana dagaagfachuu keessatti barsiisaa fi hiriyoonni ishee gahee qabu. Amala of danda’ummaa isheen dagaagfatte adda baasi.
Ofiin of qajeelchuu
Civ 71. Qabxiin Ati barnoota herregaa irratti galmeessite sadarkaa eegdee gadi waan ta’eef barnoota kana haala gaarii ta’een qo’achuuf karoorfatte haa jennu. Haala kanaan miira akkamii dagaagfattee?
Civ 72. Walfakkaachuu,ejjannoo dhabuu, dhibaa’ummaa fi miirawaan amala namummaa akkamii agarsiisu?
Hirkattummaa irraa bilisa
Civ 73. Kanneen armaan gadii keessaa dhiibbaan biyyoota gara aadaa ofiin ofdanda’ummaatti geessu kami?
Rakkoowwan jiran furuuf humnoota alaatti amanuu
Gargaarsatti amanuu fi pirojektiin guddinaa dhabamuu
Aadaa gargaarsa irraa gara guddina walitti fufaa ta’etti ce’uu dagaagfachuu
Hoggansa gahumsa hin qabnee fi arjooma qindoomina hin qabne
Civ 74. Qabeenya qabnu keessaa fedhii gara fuula duraatiif jechuun hamma ta’e kaa’uun maal jedhama?
Civ 75. Obbo Mootiin intala isaa heerumsiifachuuf baasii guddaa ta’e baase. Cidha booda kasaaraa keessa galee jira. Maddi kasaaraa isaa inni guddaan maal ta’uu danda’aa?
Hanqina karoora maatii
Galii fi itti fayyadamni walmadaaluu dhiisuu
Civ 76. . Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhaabbata aadaa Afoosha ilaalchisee sirriidha?
Dhaabbata bu’a qabeessa ta’edha.
Dhaabbata aadawaakan walitti bu’iinsa furuuf fayyaduudha.
Dhaabbata bu’aa irratti hin xiyyeeffanne kan yeroo rakkootiif gargaarudha
Dhaabbata faayinaansii ammayyaati.
Civ 77. Kanneen armaan gadii keessaa hariiroo sababaa fi bu’aa hiyyummaa ilaalchisee kan dhugaa ta’e kami?
Galii guddaa —> qusannaa xiqqaa —> investimantii xiqqaa —> oomishtummaa dabala
Galii xiqqaa —> qusannaa guddaa —> investimantii guddaa —> oomishtummaa hir’isa
Galii guddaa —> qusannaa guddaa —> investimantii guddaa —> oomishtummaa dabala
Galii xiqqaa —> qusannaa xiqqaa —> investimantii xiqqaa —> oomishtummaa hir’isa
Civ 78. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu gartuu hawaasaa miti?
Naannoo walfakkaataa ta’erra kan qubatan
Fedhii waliinii qooddachuu
Civ 79. Hirmaannaawwan armaan gadii keessaa kan sadarkaa mana barumsaatti mul’atu kami?
Walgahiiwwan siyaasaa irratti hirmaachuu
Sirna barnootaa bocuu fi fooyyessuu
Of beeksisuu fi filachuu
Dhimma hawaasaa beekuu
Civ 80. Rakkoon filannoon bilisaa fi haqa qabeessa ta’e akka hin gaggeeffamne taasisu kan uumamuu danda’u:
Kan hunda hammate ta’uu isaati
Falmiin siyaasaa banaa ta’e dhibuu
Filannoo dursa darbaa
Civ 81. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu beekumsa ibsa?
Rakkoo jiru furuu
Saaxilamummaa hiyyummaa dabaluu
Babaldhina kalaqaa hir’isuu
Sadarkaa jireenyaa fooyyessuu keessatti gahee hin qabu.
Civ 82. Kanneen armaan gadii keessaa yaada odeeffannoo waliin hariiroo kan qabu kami?
Dhugaa dheedhii kan hin qaacceffamnedha
Daataa hiikni itti hin kennamneefi guutummaatti hiika hin qabnedha.
Odeeffannoon hariiroo hawaasaa keessatti gahee xiqqaa qaba.
Civ 83. . Itoophiyaan baha Afrikaatti argamti. Kun kan ibsu:
Civ 84. Filannoowwan armaan gadii keessaa isa kamtu adda?
Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu
Mirga mormuu yookiin deeggaruu
Mirga filannoo keessatti hirmaachuu
Mirga seeraan ala himatamuu dhiisuu
Civ 85. Heera dimookirasii keessatti aangoo siyaasaa olaanaa kan qabu ummata.Kun kan agarsiisu qajeelfama;
Dhabamuu mirga garee xiqqaa
Civ 86. Itoophiyaa keessatti ijaarsa nageenyaa fi walitti dhufeenya nageenya irrat ti hundaa`e fiduuf, wantoonni armaan gadii hundi guutamuu qabu. Garuu tokko miti:
Qabeenya bifa sirrii ta’een qoqqooddachuu
Mootummaan dhimmootasasalphaa jireenya dhuunfaa keessa seenuu dhiisuu
Garee xiqqaa deeggaruu
Civ 87. Heerri bu’uuraa fi seera olaanaa biyya tokkooti. Himni kun kan ibsu?
Namni kamiyyuu seera jalatti buluu fi seera kabajuu hin barbaachisu.
Seeraa fi gochi heera biyyaatiin walitti bu’u fudhatama hinqabu
Heerri seera dhaabbataadha
Heeraa fi seerri of danda’ee addatti kan dhaabbatedha
Civ 88. .Kanneen armaan gadii keessaa tokko pirinsipilii bu’uura Heera MFDRI jalatti hin hammatamu?
Addaan bahinsa mootummaa fi amantii
Ittigaafatamummaa fi Iftoomina
Civ 89. Dhabamuun olaantummaa seeraa biyya keessatti rakkoo inni fidu.
Bulchiinsa garee guddaa
‘C’ malee hunduu deebiidha
Civ 90. Haala qabatamaa Itoophiyaatiin barbaachisummaan qoodaminsa aangoo mootummaa federaalaa fi naannolee maali?
Sirna dimookirasii guddisuu fi bulchiinsa gaarii dagaagsuuf
Garaagarummaa keessummeessuu fi walqixxummaa fiduuf
Mirga ofiin ofbulchuu naannolee waan kabachiisuuf.
Civ 91. Akkuma beekamu yeroo ammaa, biyya keenya Itoophiyaa keessatti malaamaltummaan rakkoo hammataadha. Akka yaada keet itti sababa rakkoo kanaa kan ta’e maal ta’uu danda’a?
Angoo seeraan ala fayyadamuu
Dhabamuu ittigaafatamummaafi iftoominaa
Civ 92. Akka heera MFDRItti keeyyata kamtu lammileen mirga walqixxummaa seera duratti qaban agarsiisa?
Civ 93. Kanneen armaan gadii keessaa tokko walqixxummaan sabootaa, sablammootaafi ummaattoota Itoophiyaa akka dagaagu kan deeggaru miti?
Ofiin of bulchuu
Guddina dinagdee sirriifi walmadaalaa ta`e
Bu’uuraalee misoomaa bifa walmadaaluun kennuu
Civ 94. .Barbachisummaan deeggarsa addaa dubartootaaf taasifamu akka Heera MFDRItti?
Walqixxummaa koornayaa dhiiraa fi dhala jidduu jiruu idileessuuf
Hirmaannaa dubartootaa murteessuuf
Kaka’uumsa hirmaannaa dhiiraa dagaagsuuf
Hirmaannaa dubartootaa warroota dhiiraa caalaa dagaagsuuf
Civ 95. Ati akka barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaariitti, garaagarummaa barattoota gidduu jiruu haala kamiin keessummeessita?
Barattoota hundaa haala walfakkatuun keessummeessuu
Akkaataa fedhii isaanii fi haala keenna barnootaa
Barattoota ciccimoo ta’aniif xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan
Civ 96. Himoota armaan gadii keessa kamtu hawaasa keessatti jirachuu haqummaa ibsa?
Nama dhuunfaa eenyummaa isaa irratti hunda’uun gargaaruu
Nama dhuunfaa haala qabatamaa seeraa irratti hunda’uun gargaaruu
Nama dhuunfaa haala ajaja nama dhuunfaa fi aangoo inni qabuun deeggaruu
Lammiilee yeroo hundaa bifa wal fakkatuun deeggaruu
Civ 97. Dhimma walitti bu’iinsa tokkoo, karaa aadaa hawaasni walitti bu’iinsa furatuun kan hin furamne yoo ta’e , murteen hojiirra ooluu qabu isa kami?
Dhimmicha garaa mana murtiitti fiduu
Dhimmicha gonkumaa dhiisuu
Partilee irratti dhiibbaa gochuun dhimmicha akka adda baasanii ilaalan tasiisuu
Civ 98. Dirqamni lammilee biyya tokko irraa eegamuu fi dirqamni lammilee biyya alaa ta’an irraa hin eegamne kami?
Ashuuraa (Gibira) kaffaluu
Tajaajila ittisa biyyaa kennuu
Yeroo rakkoon namoota dhaqabe gargaaruu
A fi B deebiidha
Civ 99. Waranni beekkamaa fi ummanni Itoophiyaa kutannoon wereera biyya alaa ofirraa ittisuuf taasiise maal jedhama?
Waraana Itoophiyaa fi Ertiriyaa
Waraana Ahimad Giraany
Qabsoo Saboonni, sablammoonni fi ummatoonni Itoophiyaa walqixxumaaf tasiisan
Civ 100. Qaamman aangoo mootummaa keessaa isa kamtu irra caalaatti ittigaafatamummaa eegumsa seeraa fi haqummaan hojiirra akka oolu tasisa?
Qaama seera hiiktuu
Qaama seera tumtuu
Civ 101. Ittigaafatamummaa barattoonni mana barumsaa keessatti hojiirra oolchuu qaban kan ibsu kami?
Biqiloota dhaabuu fi bishaan obaasuu
Qulqullina mooraa mana barumsaa eeguu keessatti hirmaachuu
Sirna alaabaa irratti argamuu
Civ 102. Kaneen armaan gadii keessa tokko dirqamaa qabeenya Itoophiyaatiif eegumsa gochuu hin qabu.
Lammii biyya alaa
Civ 103. Hambaalee seenaa armaan gadii keessaa tokko “UNESCO”dhaan kan galma’ee miti?
Civ 104. Duudhaa aadaa eeguu fi hambalee seenaa kunuunsuu irratti gochi lammilee irra hin eegamne isa kami?
Duudhaalee aadaa fi hamabaalee seenaa naannoo keenyaa qofatti argamuuf kunuunsa gochuu
Yeroo gaaffatamne qofa deeggarsa gochuu
Ofii keenyaaf qofa itti bashannaanuu
Civ 105. Akka barsiisaatti waaa’ee dhukkuba HIV/AIDS’n walqabate barattoota kee maal gorsita?
Fuudhaafi heeruma dura walqunnamtii saalaa rawwachuu dhiisuu
Tokkoof tokko ta’uu
Kondoomitti seeraan akka fayyadaman gorsuu
Civ 106. Nama hojii uumuu fi hojilee adda adda keessatti milka’aa ta’e irraa kan hin eeggamne maali?
Hubannaa fi hojiif kabaja kennuu
Kaka’umsaa fi haamilee qabaachuu
Dhimmoota hunda irratti namoota biroo deeggarsa gaafachuu
Yeroodhaaf bakka guddaa kennuu
Civ 107. Akka qabatama haala Itoophiyaatti barsiifatni aadaa hojii cimaa miidhu isa kami?
Yerootti seraan fayyadamuu
“B” malee hunduu deebiidha
Civ 108. Akka Heera MFDRIti isa kamtu mirga hojjettootaa of keessatti hin hammanne?
Oomishaa fi qabeenyaatti fayyadamuu
Bakkaa fi hojii filachuu
Ashuuraa (Qaraxaa) kaffaluurra bilisa ta’uu
Civ 109. Kamtu amala ogummaa hojii walee(gamtaa) jalatti hin hammatamne?
Qabeenya seeraan itti fayyadamuu
Beekumsa ofii fooyyeffachuu
Waldeeggaruu fi hiriyyoota kabajuu
Civ 110. Akka barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaariitti wanti sirraa hin eeggamne maalidha?
Humnatti fayyadamuun barattoota irratti ilaalcha kee fe’uu
Yeroo naamusa gadhee ta’e argitu call’isuu (Cal jettee dabruu)
Gochootaa fi murtee bulchiinsa mana barumsaa mormuu
Hunduu deebii ta’a
Civ 111. Yaada of danda’uu kan ibsu hima kami?
Qabeenya qabnuun danddeetti fedha ofii guuttachuu
Namoonni biroo fedha keenya nuuf guutan jennee abdachuu
Namoota biroo dhiisuun jireenya mataa ofii qofa jiraachuu
Guutuummaan guutuutti namoota biroo irraa addatti of danda’uu
112. Namni tokko ofdanda’eera kan jechisiisu yoo maaal ta’e/taateedha?
Yaaduu fi hojii mataa isaa/isheef qofa yoo hojjete/tte
Ani namoota biroo irraa fooyya’aadha jedhee/tte yaaduu yoo danda’e/dandeesse
Hirkattummaa irraa bilisa yoo ta’e/taateedha
Ilaalcha gadi aantummaa yoo qabaate/tteedha
Civ 113. Kanneen armaan gadii keessa isa kamtu barattoota ofitti amanamummaa qabanii ibsa?
Barattoota biroo caalaa cimaa/ tuu akka ta’etti/ taatetti of ilaaluu
Deeggarsa gochuu dhiisuu fi yaada namoota biroo wajjiin wal jijjiruu dhiisuu
Kophaatti qo’achuu fi gochoota hunda kophaa ofiin raawaachuu
Daree barnootaa keessatti ciminaan hirmaachuu
Civ 114. Himoota armaan gadii keessaa miidhaa hirkattummaa kan ibsu isa kami?
Abdii namoota biroo irra kawaachuun ni guddadha jedhanii yaaduu
Gadi aantummaan namatti dhaga’amuu
Civ 115. Filannoowwaan armaan gadii keessaa tokko koontirobaandii (daldalli seeraan alaa) hin ibsu?
Guddina dinagdee ariifachisaa fida
Galii biyyattiin argachuu qabdu hir’isa
Malaamaltummaaf karaa bana
Civ 116. Misoomni kan mirkana’u;
Hojjettoota hojii uumanii fi kaka’uumsa qaban yoo horanne
Hojii koontiroobaandii (daldala seeraan alaa) yoo babal’ifne
Lammilee etiksii qabanii fi ofitti amanamummaa qaban yoo horanne
A fi C deebiidha.
Civ 117. Akka aadaatti jechi “yeroon warqii dha” (time is gold) jedhu kan agarsiisu;
Yeroon garee hawaasaa murasa qofa ofkeessatti hammata
Yeroo qabnu seeraan yoo itti fayyadamne guddachuu ni dandeenya
Yeroon namoota hundaaf walqixa kan kennamee miti
Namoonni hunduu yerootti haala walqixa ta’een fayyadamuu ni danda’u
Civ 118. Kaneen armaan gadii keessa tokko seeraan yoo itti hin faayyadamnee deebisnee bakka busuu hin dandeenyu?
Civ 119. Qusannaan maliif barbaachisa jettee yaadda ?
Qarshii baay`ee walitti kuufachuun sooreessa ta’uuf
Suuta suutaan fedhii ofduraa qabnu guuttachuuf
Kufaatii hin tilmaamamne keessa galuuf
“A” malee hunduu deebiidha
Civ 120. Akka qabatama Itoophiyaatti, aadaa qusannaa qabnu kan miidhe;
Galii nama dhuunfaa
Hubannaan qusannaaf qabnu gadi aanaa ta’uu
Dhaabbileen qusannaa lakkoofsaan xiqqaa ta’uu
Dhaabbilee qusaannaa irraa amantaa dhabuu
Civ 121. Kanneen armaan gadii keessaa tokko dhaabbata qusannaa miti.
Civ 122. Dhaabbilee qusannaa tajaajila qusannaa fi liqii intarpirayizii xixiqqaa fi qonnaan bultootaaf kennu;
Baankii daldala It
Dhaabbilee qusannaa fi liqii
Civ 123. Aadaa qusannaa dagaagsuun kan danda’amu;
Hubannoo barbaachisummaa qusannoo kennuun
Baay’ina maatii qabeenya qabnu irratti hunda’uun murteessuu
Fedhii qabnu galii argannu waliin wal simsiisuu
Civ 124. Himoota armaan gadii keessa kamtu danddeettii namoota birootiin jiraachuu agarsiisa?
Fedhii qabnu qabeenya qabnuun walmadalchisuu
Fedii ofii qarshiin guuttachuu
Waa’ee boruu yaaduu dhiisuu
Fedhii ofii guuttachuuf namoota biroo irratti hirkachuu
Civ 125. Filannoowwan armaaan gadii keessaa hirmaanna cimaan hawaasaa kan mul`achuu danda`u eessatti?
Hawaasa amala walfakkaatu qabuun
Hawaasa amala adda addaa qabuun fi waliigaltee hinqabneen
Hawaasa walitti bu`insaan guutameen
B fi C deebiidha
Civ 126. Barbaachisummaan hirmaannaa cimaa hawaasaa maliin ibsama?
Hirmaannaa qaama fedhii qaban
Civ 127. Hirmaannaan cimaa hawaasaa sadarkaa kamitti barbaachisa?
Civ 128. Hawaasni siivikii;
Garee fedha qabaniini/namoota dhuunfaan kan gurmaaa’e.
Qaamolee bu’aa barbaadaniin kan gurmaa`eedha
Civ 129. Filaannoowwan armaan gadii keessaa isa kamtu hawaasa siivikii jalatti hin ramadamne?
Komishinii farra malaamaltummaa
Garee mirga dhala namaa ilaalu
Civ 130. Gochoota armaan gadii keessaa tokko hawaasni siivikii qooda keessatti kan hin fudhanneedha?
Fedhii fi mirga miseensootaa eeguu
Dhaabbilee tajaajila fayyaa kennan deeggaruu
Mirga lammilee eeguu
Aangoo siyaasaa qabachuu
Civ 131. Beekumsi;
Wantoota argan, dhagahan,baratanii fi dubbisan irraa hubachuu
Dandeettii qaban gochatti hiikuu
Barumsa muuxannoon argamu caalaa barachuun kan argatan
Civ 132. Beekumsa fedhuun kan agarsiisu;
Beekumsa argachuuf galma’uu
Civ 133. Beekumsi kan argamu karaa kamiini?
Civ 134. Barattoonni barnoota yeroo dheeraaf yaadachuu kan danda`an;
Civ 135. Boontuun intarneetii keessa barbaaduun diyaagraamii abbaltii isheef kenname keessa galchite. Garuu, madda ragichaa hin ibsine. Amanamummaa dhabuun akkasii maal jedhama?
Hojii nama biraa akka kan ofiitti fayyadamuu (Hanna)
Amala badaa barnootaa
Hojii nama biraa waraabuu
Civ 136. Dhabamuun olaantummaa seeraa biyya keessatti rakkoo inni fidu:
Civ 137. Dhabamuu ofitti amanamummaaf sababa kan ta’uu danda’u kami?
Civ 138. Namni amala of danda’uu qabu nama hirkkattummaa qabuu irraa adda kan taasisuu kami?
Civ 139. Dhiibbaa miidiyaan ofitti amanamummaa irratti fiduu danda’uu qolachuuf kan nama hin gargaarree kami?
Civ 140. Hirkattummaan sadarkaa kamirratti mul’achuu danda’aa?
Civ 141. Kanneen armaan gadii keessaa tokko dhaabbata qusannaa ammayyaa miti.
Dhaabbata faayinaansii xixiqqaa
Civ 142. Qusannaan dubartoota gurmaa’anii bu’aa akkamii fiduu danda’a?
Akka hojii adda addaa irratti hirmaatan gargaara.
Aadaa ofitti amantummaa guddifatu
Amala qusannoo wali guddifachuu danda’u
Civ 143. Kannen armaan gadii keessaa tokko humnaa ol dabaluu lakkoofsa uummataaf sababa miti.
Tajaajilli fayya bababalachuu dhabu
Karoora maatitti fayyadamuu dhabuu
Civ 144. Humnaa ol dabaluun lakkoofsa uummata biyya irratti rakkoo akkami fiduu danda’a?
Hanqina nyaata madaalawaa
Carraa barnootaa dhabuu
Civ 145. Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa hirmaannaa hawaasaa kan ta’e kami?
Hawaasni akka jijjiramni dhufu taasisa
Namni dhuunfaan jijiramni akkamin akka dhufu barata
Lammiileen fedhii nama dhuunfaa fi hawaasaa ni beeku
Civ 146. Hirmaannaa siyaasaa ilaalchisee kan sirri hin ta’ane kami?
Hirmaannaan siyaasaa sirna hunda keessatti adeemsaa walfakkaatu qaba.
Aangoo uummanni dhimma mootummaa keessatti qooda qabu dha.
Beekumsaa bu’uurraa, ogummaa yaaduu fi amala siivikaawa ta’e barbaada.
Civ 147. Kanneen armaan gadii keessaa bu’aa hawaasa siivikii kan ta’e kami?
Bulchiinsi ilaalchaa fi yaada kallatti adda addaa akka hubatu taasisa.
Sabboonummaa, ulfinaa fi miira abba biyyummaa lammiilee jajjabeessa.
Mootummaan waa’ee yaada lammiilee odeeffannoo guutuu akka argatu taasisa.
Civ 148. Naannoon keenya eegamuu kan danda’uu:
Yoo hawaasni fedhii isaatiin hirmaate
Gumii kunuusa naannoo hedduu hundeesuun
Mootummaan kunuunsa naannoo irratti seera cimaa baasuun
Maallaqa hedduu kunuunsa naannoof yoo ramadame.
Civ 149. Kanneen armaan gadii keessa madda beekumsaa kan ta’e kami?
Qorannoo fi qo’qnnoo
Civ 150. Kanneen armaan gadii keessaa madda odeeffannoo kan hin taane kami?
Civ 151. .Faayidaa quunnamtii afaanii kan hin taane kami?
Addunyaawaadha ykn bakka hundatti faayidaa kennuu danda’a.
Haala saffisaa ta’een yaada waljijjiiruu nama dandeessisa.
Namoonni waan isaaniif hingallee gaafatanii ibsa argachuu danda’uu
Walquunnamtee fuulaaf fuulaan waan ta’eef raawwiin isaa hubatamuu danda’a
Civ 152. Kanneen armaan gadii keessaa gufuu quunnamtii kan jedhamu kami?
Tilmaama ifa hin taane
Jechoota hiika baay’ee qaban
Sirritti dhaggeeffachuu dhabuu
Civ 153. .Ragaalee xiinxaluun faayidaalee akkami qaba?
Rakkoolee addaan baafachuun yaada furmaataa eeruuf
Gaaffii qorannoof deebii qabatamaa ta’e kennuuf
Arggannoowwan tartiibessuun akka hojiirra oolaniif
Barsiisaan Barnoota Lammummaa fi Amala Gaarii kan kutaa 6ffaa haala barattoonni daree hundi bakka bu’aa daree isaanii itti filatan haala mijeesse haa jennu. Akaakuun dimokiraasii barattoonni shaakalan:
Dimokiraasii bakka bu’iinsaa
Aangoo bakka buusuu
Civ 155. Seerri jiraachuun hojiirra ooluun
Mootummaan dimokiraatawaa jiraachuu
Aangoon mootummaa murtawaa ta’uu
Aangoon mootummaa gadidhiisii ta’uu
A fiB deebii ta’u
Civ 156. Kanneen armaan gadii keessaa mirga uumamaa kan hintaane isa kami?
Mirga lubbuun jiraachuu
Civ 157. Akka Heera Itoophiyaa yeroo ammaatti, walqixummaan diinagdee irra caalaatti maal agarsiisa?
Lammileen qabeenya walqixa qabaachuu
Lammileen kaappitaala walqixa qabaachuu
Lammileen carraa qabeenya horachuu argachuu
Lammileen kaffaltii walqixa ta’e argachuu
Civ 158. Mana murtii armaan gadii keessaa isa kamtu murtii isa xumuraa kennuu danda’a?
Mana murtii Olaanaa Federaalaa
Mana murtii Olaanaa sadarkaa naannoo
Mana murtii Fedaraala sadarkaa tokkoffaa
Mana murtii waliigala Federaalaa
Civ 159. Sirna diimookiraasii ilaalchisee soba kan ta’e isa kami?a.
Sirna bulchiinsaa baayinummaan keessatti kabajamudha.
Sirna bulchiinsaa yaadawwan garaagaaraa keessummeessudha.
Sirna bulchiinsaa fedhii abbootii aangoo galmaan ga’uuf xiyyeeffatudha.
Sirna bulchiinsaa abbootiin aangoo itti-gaafatamummaa fudhatanidha.
Civ 159. Sirna diimookiraasii ilaalchisee soba kan ta’e isa kami?
Civ 161. “Qaama miidhamummaan of danda`uu nama hindhorku” jechamni jedhu maal agarsiisa?
Qaama miidhamtoonni hundi hirkattoota ta’u yaada jedhu
Qaama miidhamummaan hojii nama hindhorku yaada jedhu
Qaama miidhamtoonni gargaarsa qofaan jiraachuu qabu yaada jedhu
Qaama miidhamtootaaf deeggarsi addaa taasifamuu hinqabu yaada jedhu
Civ 162. Waa`ee “beekumsaa fi dandeettii” ilaalchisee kan yaada dogoggoraa ta’e qabu isa kami?
Namni kamiyyuu hanqina mataa isaa ni qabaata.
Namni tokko abbaa beekumsa hundaa ta`uu ni danda`a.
Namni kamiyyuu dandeettii fi beekumsa mataa isaa qaba.
Beekumsii fi dandeettiin muuxannoon gabbataa adeema
Civ 163. Yaada rimee Giloobaalaayizeshiinii dogoggoraa kan of keessaa qabu isa kami?
Hawaasa addunyaa karaa hawaasummaa walitti hidhuu
Hawaasa addunyaa karaa dinagdee walitti hidhuu
Hawaasa addunyaa karaa siyaasaa walitti hidhuu
Hawaasaa Addunyaa gama hundaan tokko taasisuu
Civ 164. Kanneen armaan gadii keessaa Itoophiyaa keessatti “heerri Bulchiinsa Dargii bara 1987“ isa kami hojiirra oolche?
Sirna Sooshaalizimmii hundeessuu
Sirna paartii hedduu hundeessuu
Sirna Gabaa bilisaa hundeessuu
Sirna aangoon dhaalaan darbu hundeessuu
Civ 165. Ciminaa fi maqaa gaarii Itoophiyaan sirnoota darban keessatti sadarkaa addunyaatti ittiin beekamaa turte isa kami?
Bulchiinsa gaarii mirkaneessuu danda’uu isheetiin
Lammiilee of-danda’an horachuu danda’uu isheetiin
Birmadummaa biyyaa eeggachuu danda’uu isheetiin
Misooma amansiisaa mirkaneessuu danda’uu isheetiin
Civ 166. Haqummaan biyya tokko keessa jiraachuun karaa kamiin ibsamuu danda’a?
Qaamni aangoo qabu olaantummaa isaa yoo mirkaneesse
Mirgoonni garee xiqqaa qofti xiyyeeffannoo yoo argate
Bu’aa fi faayidaan abbootii taayitaa kan uummataa yoo caale
Lammiiwwan walqixxummaan tajaajilaa fi eegumsa yoo argatan
Civ 167. Ijoon kaayyoon Imaammata alaa yeroo ammaa Itoophiyaan hordoftu isa kami?
Birmadummaa fi fedhii biyyolessaatiif dursa kennuu
Fedhii fi faayidaa biyyoota ollaatiif dursa kennuu
Dhimma biyya biroo keessa seenuuf dursa kennuu
Yeroo hundaa gargaarsa argachuuf of-qopheessuu`
Civ 168. Seenaa hawaasummaa uummattoota Itoophiyaa keessatti sirna Moototaa fi sirna Dargii kan wal-hinfakkeessine isa kami?
Sirnoota lamaanuu keessatti walqixxummaan hawaasaa kabajamuu dhabuu
Sirnoota lamaanuu keessatti amantiin mootummaatti kan hidhame ta’uu
Sirnoota lamaanuu keessatti Afaan sabootaa walqixa xiyyeeffannoo dhabuu
Sirnoota lamaanuu keessatti mirgoonni bu’uuraa lammiilee kabajamuu dhabuu
Civ 169. Akka Heera Itoopiyaa bara 1995tti waa’ee Muummicha Ministeeraa ilaalchisee kan dogoggora ta’e isa kami?
Dura bu’aa mana maree ministeerotaati
Dura bu’aa mootummaa Itoophiyaati
Miseensa paartii kamiiyyuu miti
Ajajaa humna waraanaa Itoophiyaati
Civ 170. Kanneen armaan gadii keessaa etiksii ogummaa tokko bu’a qabeessa taasisuu kan hindandeenye isa kami?
Seera etiksichaa dhoksaadhaan yoo jiraate
Ogeessonni hubannoo akka qabaatan yoo taasifame
Wantoonni rakkoo uuman adda baasuun yoo danda’ame
Lammiileef odeeffannoo sirrii dabarsuun yoo jiraate
Civ 171. Akka yaada hiddama ammayyummaatti, biyyoonni misoomaan boodatti hafan akka “Itoophiyaa” gara misoomaatti dhufuuf daandii biyyoota misoomanii qofa hordofuu qabu kan jedhu akka haala qabatamaa Itoophiyaatti hanqina maali qaba?
Miira hirkattummaa lammiilee jajjabeessa
Lammiileen miira of-danda’uu akka horatan taasisa
Muuxannoo hojii biyyi tokko uummachuu qabu gabbisa
Namoonni akka waan haaraa kalaquu danda’aniif karaa bana
Civ 172. Yaada rimeen qusannaa sadarkaa nama dhuunfaatti hubatamuu qabuun kan wal hin qabanne isa kami?
Yeroo qaban karooraan itti gargaaramuu
Qabeenya qaban sirnaan itti fayyadamuu
Galii fi baasii mataa ofiif karoorfachuu
Qabeenyaa qabanitti fayyadamuu dhiisuu
Civ 173. Kanneen armaan gadii keessaa qabeenya mataa ofiif horatan qisaasesssuun maaliin wal hinqabatu?
Wallalummaa fi hanqina hubannaa qabaachuu
Dandeettii ofii malee kabajaa fi ulfina barbaaduu
Karoora qabaachuu fi hanga humna ofiitti jiraachuu
Ofitti amanamummaa dhabuu fi nama biraan qajeelfamuu
Civ 174. Kanneen armaan gadii keessaa kaayyoon heera Itoophiyaa bara 1931 inni ijoon isa kami?
Caasaa mootummaa federaalawaa diriirsuu
Sirna rippuubiliikii akka hojiirra oolu taasisuu
Mootummoonni naannolee akka ofiin of-bulchan taasisuu
Aangoo mootichaa dhaalaan akka darbu taasisuu
Civ 175. Kanneen armaan gadii keessaa dirqama barreessaa seenaa kan ta’e kami?
Ragaa waa’ee barreessu sanaa argachuu qaba
Dhiibbaa qaama biraa irraa bilisa ta’uu qaba
Ragaawwan dhimma qoratuu adda addaa walbira qabee madaluu qaba
Civ 176. Caasaa bulchiinsa Itoophiyaa yeroo ammaa keessaa qaamni bulchiinsaa aangoo seera raawwachiisummaa qabu kami?
Mana maree ministeerotaa
Mana murtii Federaalawaa
Mana maree bakka bu`ootaa
Mana maree Federeeshinii
Civ 177. Olaantummaa seeraa kan hinargisiisne kami?
Seerri waan hunda hoogganuu
Hooggantoonni mootummaas seeraa ol akka hintaane argisiisa
Seera wallaaluun adaba jalaa nama hinbaasu
Lammiileen hundi seeraa ol ta`uu
Civ 178. Sirna dimokiraasii keessatti kan sagalee caalmaa argate nibulcha. Kun yaada armaan gadii keessaa irra caalaa isa kam waliin walittidhufa?
Hooggansa garee guddaa
Sirna paartii hedduu
Civ 179. Yaadni jaalala biyyaa sirna dimokiraatawaa hintaane ibsu kami? A. Amanamummaa lammiileen biyya isaaniif qaban.
Amanamummaa lammiileen biyya isaaniif qaban.
Amanamummaa lammiileen sirna tokko eeguutiif qaban.
Amanamummaa lammiileen aadaa isaanii guddisuuf taasisan.
Civ 180. “Goolii diimaan” ibsituu maaliiti?
Tarkaanfii biyya duroomsuu
Walqixxummaa fi bilisummaa yaada ofii ibsachuu
Gochoota miti- dimokiraatawaa ummata irratti raawwate.
Mirgoota dhuunfaa fi garee kabajuu
Civ 181. Kanneen armaan gadii keessaa tokko kaayyoo gooroo barnootaati?
Civ 182. Barsiisaan tokko karoora barnootaa alatti daree barnootaa yoo seene maaltu qunnamuu danda`a?
Sagantaa barnootaa seeraan hoogganuu hindanda`u
Ofitti amanamummaa dhabuu fi yaadota waldhahaniin barsiisuu
Karoora barnootaa qabaates qabaachuu baates garaagarummaa hinqabu.
Afi B deebiidha
Civ 183. Kanneen armaan gadii keessaa tokko qabiyyee kaayyoo gooroo barnootaa jalatti hinhammatamu?
Kaayyo gooroo gosa barnoota barsiifamuu
Meeshaalee deeggarsa barnootaa
Civ 184. Qaamni bulchiinsa mana barumsaa tokko daree barnootaa dabalataa ijaaruuf karoora waggaa lamaa baafatee yeroo jedhametti seeraan fayyadamee xumureera. Isa kana irraa kan hubannu?
Karoorich seeraan hordofameera
Karoorri gochoota seeraanfayyadamuu fi yeroo seeraan fayyadamuuf barbaachisaadha.
Karoorri yoo hinjiraanne hojii tokko galmaan gahuun rakkisaadha.
Civ 185. Barsiisaan tokko barattoota adda baasuun qabxii kan kennu yoo ta`ee fi barattoonni gocha isaa kan morman yoo ta`e, gochi kun murna kam jalatti ramadama?
Murna qaam- sammuu
Murna yaad- sammuu
Civ 186. Hubannoon barattoota daree keessa jiran garaagarummaa yoo kan qabaatu ta`e maaltu barbaachisa jettee yaadda?
Yeroo karoora barnootaa qopheessinu garaagarummaa ilaalcha keesa galchuu.
Meeshaalee deeggarsa barnootaa dandeettii isaanii irratti hundaa`uun qopheessuu.
Mala baruu barsiisuu dandeettii fi fedhii isaanii irratti hundaa`uun fayyadamuu
Civ 187. Malleen baruu barsiisuu armaaan gadii keessaatti barsiisaan kan gochaalee dhuunfatu kam keessatti?
Mala barsiisaa giddu galeeffateen
Mala barataa giddugaleeffateen
A fi C deebiidha
Civ 188. Qabiyyee kenname keessatti mata dureen barsiifamu bal’aa yoo ta’e fi ibsa bal`aa kan barbaachisu yoota`e, malleen baruu barsiisuu armaan gadii keessaa isa kamtu filatamaadha?
Mala barattoota giddugaleeffate.
Mala barsiisaa giddugaleeffate.
Lamaanuu bifa walfakkaatuun hojii irra oolchuu.
Cimina qabiyyichaa ilaalcha keessa otuuhingalchiin malleen lamaanittuu fayyadamuu
Civ 189. Barsiisaan tokko daree seenee fuula barattootaa wayita ilaalu barattoonni isaa fedha kan hinqabne, namoota waliin kan walittidhufenya hinqabne, deebii kan hindeebifne, kan jeeqan fi barnootaaf dhimma kan hinqabnedha. Kanaaf murteen inni jalqabaa barsiisichi fudhachuu qabu maal ta`uu qaba?
Barattoonni amala akkasii maaliif akka argisiisan adda baafachuu
Barattoota otuu hingaafatiin tarkaaniffii fudhachuu.
Amala argisiisaniin walqabsiisee barattootaa fi gorsaa fi deeggarsa gochuun amala isaanii akka fooyyeffatan gochuu
Yoo barbachisaa ta`e namoota biroo hirmaachisuu.
Civ 190. Malleen baruu barsiisuu irratti dhiibbaa kan hinfidne isa kami?
Civ 191. Malli baruu barsiisuu tokko qoftii fi adda ta`e hinjiru. Isa kana irraa ka`uun yoo guduunfinu;
Malleen baruu barsiisuu barattoota giddugaleeffatee fi barsiisaa giddu galeeffateen barsiisuu qabna.
Malli baruu barsiisuu kan murtaa`u sababoota baay`eetiini.
Malli baruu barsiisuu bu`a qabeessa ta`e fedha barsiisaa irratti hundaa`ee yoo filatamedha.
Civ 192. Barsiisan Barnoota Lammummaa fi Amala Gaarii barattoota kutaa 6ffaa qabiyyee barnootaa wayita barsiisu malleen barsiisuu adda addaatti fayyadamee barsiise. Garuu jijjiiramni hirmaannaa barattootaa fi qabxii isaanii irratti mul`ate hinjiru.Akka hubannaa keetiitti rakkoon mala baruu barsiisuu qunname maaldha?
Malli baruu barsiisuu qophaa`e sadarkaa barattootaa irratti kan hundaa`e miti.
Yeroo barsiisaan barattootaaf ibsa taasisu rakkoon jiraachuu ni danda`a.
Barattoonni yeroo barsiisaan barsiisu xiyyeeffannaan hin hordofne ta`a.
Civ 193. Yeroo meeshaa deeggarsa barnootaa daree barnootaa keessatti fayyadamnu wanti raawwachuu hinqabne maalidha?
Meeshaalee deeggarsa barnootaa haala barattoonni hundi arganiin fayyadamuu
Ibsa waa`ee meeshaa deeggarsa barnootaa erga barnoota xumurreen booda taasisuu
Hanga danda`ameen meeshaa deeggarsa barnootaa mata duree barsiifnu wajjin deemu fayyadamuu
Waa`ee meeshaa deeggarsa barnootaa fuula kee barattootatti naannessuun ibsuu
Civ 194. Akkaataa taa`umsa tartiiba qormaata barnootaatiin isa kamtu sirriidha?
Dhugaa fi soba, Filannoo, Firoomsii, ibsa.
Filannoo, Dhugaa fi soba, Firoomsii, ibsa.
Filannoo, Firoomsii, Dhugaa fi soba, Ibsa.
Dhugaa fi Soba, Firoomsii, Filannoo, Ibsa
Civ 195. Barattuun shamarreen daree barnootaa kee keessatti argamtu barataa dhiiraa isheen waldorgomu caaltee qabxii olaanaa yoo kan galmeessitu ta`e maaltu sitti dhagahama?
Jajjabeessuu fi jajuun akka itti fuftu gochuu
Akka isheen barattoota dhiiraa irraa garagalchitetti yaaduu
Barattoota biroo irraa akka isheen hingalagalchine akeekkachiisuu
Civ 196. Kanneen armaan gadii keessaa madaallii walittifufaaf kan hinbarbaachifne isa kami?
Barattootaaf qabxii kennuu
Karoora baruu barsiisuu qopheffachuu
Jijjiirama barattootaa hordofuu
Civ 197. Madaalliin barattootaa yoom qindaa’a?
Xumura barnoota waggaa irratti
Jalqaba barnootaa hanga dhuma bara barnootaa
Yeroo barsiisaan fedhetti
Yeroo qormaata giddugaleessaa fi xumuraa.
Civ 198. Faayidaan barattoota walitti fufinsaan madaaluu maali?
Qabxii barattootaa walittiqabuuf
Ga`umsa barattootaa madaaluuf
Gahumsa barattootaa adda baasuu fi tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf
Civ 199. Yeroo qabiyyee barnootaa keessatti waa`ee hirmaannaa hawaasaa barsiifnu ta`e malli baruu barsiisuu gaarii ta`ee fi barattoota kee ga`oomsuuf qabiyyicha akka yaadatan taasisu?
Daawwannaa dirree bakka hawaasni naannoo biqiltuu dhaabutti taasisuu.
Gareedhaan daree barnootaa keessatti akka mar`atan gochuu.
Mala falmii garee lama gidduutti gaggeessuu
Ibsa barsiisaan daree keessatti taasisu.
Civ 200. Qabxiilee armaan gadii keessaa tokko ulaagaa meeshaalee deeggarsa barnootaa ittiin qopheessanii miti?
Meeshaalee naannootti argaman irraa qopheessuu.
Ifa, kan safaramuu danda`uu fi murtaa`aa ta`uu
Umurii barattootaa fi sadarkaa kutaa barattootaa ilaalcha keessa galchuu.
Meeshaalee ammayyaa fi alaatii dhufutti fayyadamuu
Modeela COC Bara 2012 Muummee BLAGf PDFDownload